सरकारले चन्दलाई प्रतिबन्ध घोषणासँगै सुरक्षा सतर्कता बढायो - RastraKhabar-Nepal's No. 1 Digital Newspaper
राष्ट्र सरकारले चन्दलाई प्रतिबन्ध घोषणासँगै सुरक्षा सतर्कता बढायो
सरकारले चन्दलाई प्रतिबन्ध घोषणासँगै सुरक्षा सतर्कता बढायो
March 15, 2019 rastrakhabar 0
काठमाडौँ —चैत १ ।
सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको विरोधमा नेक्रवित्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले गरेको देशव्यापी बन्दको बढी प्रभाव शैक्षिक क्षेत्रमा परेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सातै प्रदेशबाट संकलन गरेको रिपोर्टले शैक्षिक संस्थान सबैभन्दा धेरै प्रभावित बनेको देखाएको छ । स्कर्टिङ र राजमार्ग सुरक्षा गस्ती बढाइए पनि लामो दूरीका सवारीसाधन प्रभावित बनेको प्रहरीले जनाएको छ ।
रोजगारदाता किन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेटिन हिचकिचाए ?
अबदेखि बिहान ९ बजे नै राहदानी विभाग खुल्ने